SARCOIDOSISUK समर्थन ग्रुपहरू
कृपया ध्यान दिनुहोस्: हाम्रा केही समूहहरूले Eventbrite प्रयोग गर्दछन् - तपाईंलाई टिकटहरू आरक्षण गर्नु अघि नि: शुल्क खाता सिर्जना गर्न सोधिनेछ। अन्य समूहहरू फेसबुक मार्फत बैठकहरू व्यवस्थित गर्दछ - यस अवस्थामा तपाईंले बैठक जानकारीको पहुँच गर्नका लागि तपाईंलाई फेसबुक खाताको आवश्यकता पर्नेछ। यदि तपाईंले Eventbrite वा फेसबुक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न तर आगामी बैठकमा उपस्थित गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस सहयोगको लागि।
सूचीको रूपमा हेर्नुहोस्
महिना जनवरी फ्रेवुरी मार्च अप्रील मे जुन जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर वर्ष 2019 2020 2021 2022 2023 2024
24फ्रेवुअरी 24, 2020 25फ्रेवुअरी 25, 2020 26फ्रेवुअरी 26, 2020 27फ्रेवुअरी 27, 2020 28फ्रेवुअरी 28, 2020 29फ्रेवुअरी 29, 2020 1मार्च 1, 2020
2मार्च 2, 2020 3मार्च 3, 2020 4मार्च 4, 2020 5मार्च 5, 2020 6मार्च 6, 2020 7मार्च 7, 2020 8मार्च 8, 2020
9मार्च 9, 2020 10मार्च 10, 2020
More information about केन्द्रीय लन्डन समर्थन समूह
11मार्च 11, 2020 12मार्च 12, 2020 13मार्च 13, 2020 14मार्च 14, 2020 15मार्च 15, 2020
16मार्च 16, 2020 17मार्च 17, 2020 18मार्च 18, 2020 19मार्च 19, 2020 20मार्च 20, 2020 21मार्च 21, 2020 22मार्च 22, 2020
23मार्च 23, 2020 24मार्च 24, 2020 25मार्च 25, 2020 26मार्च 26, 2020 27मार्च 27, 2020 28मार्च 28, 2020
संपर्क SarcoidosisUK for details.
29मार्च 29, 2020
30मार्च 30, 2020 31मार्च 31, 2020 1अप्रील 1, 2020 2अप्रील 2, 2020 3अप्रील 3, 2020 4अप्रील 4, 2020 5अप्रील 5, 2020
दिशा निर्देशन पाउनुहोस्
लागि ड्राइभिंग पैदल यात्रा ट्रान्जिट साइकल चलाउँदै विकल्प देखाउनुहोस् विकल्प लुकाउनुहोस्
टोलबाट बच्नुहोस् राजमार्गहरू जोगाउनुहोस् घाटबाट बचाउनुहोस्
दिशाहरू ल्याउँदै ......
निर्देशनहरू रिसेट गर्नुहोस्
दिशा निर्देशनहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्
Cornwall र Devon
उत्तर पश्चिम इङ्गल्याण्ड
के तपाईं सरकोडिसिसयू यूके ग्रुप समूह चलाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? ...
तपाईं sarcoidosis द्वारा प्रभावित छ र तपाईंको क्षेत्र मा एक समर्थन समूह चाहानुहुन्छ? के तपाईंसँग समर्थन समूह चलाउन आवश्यक कौशल छ? तपाईं सोरकोडोसिसको साथ स्थानीय मानिसहरूलाई सहयोग गर्न महिना केही घण्टा दिन सक्नुहुन्छ?
SarcoidosisUK समर्थन समूहहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल स्थापना गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य यो छ कि यूकेका सबै सरोकोडोसिसको साथ यो अवस्था संग रहन अरूलाई भेट्न सक्षम हुनुपर्छ। यदि तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा एक समूह चाहानुहुन्छ र तपाइँसँग समूहको नेतृत्व गर्न मद्दतको लागि कौशल छ भने, कृपया छुनुहोस् वा तल फारम भर्नुहोस्। हामीसँग यो गर्न मद्दतको लागि धेरै अनुभव र संसाधनहरू छन्।
SarcoidosisUK एक सानो दान हो - हामी ती मानिसहरू मा भरोसा गर्छौं कि तपाइँ यी समुहहरुलाई मैदानबाट हटाउन चाहानुहुन्छ!
के तपाईं नजिकैको सरकोडोसिसयुको सहयोग समूह चाहनुहुन्छ?
SarcoidosisUK समर्थन समूहहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल स्थापना गर्न काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य यो छ कि यूकेका सबै सरोकोडोसिसको साथ यो अवस्था संग रहन अरूलाई भेट्न सक्षम हुनुपर्छ।
नयाँ क्षेत्रका समूहहरू मात्र यो क्षेत्रमा माग भएमा सुरु हुन्छ। क्षमा गर्नुहोस् यदि तपाईंको नजिकको सहयोग समूह बैठक छैन - तिनीहरू त्यस क्षेत्र र इच्छुक संगठनको पर्याप्त रुचिमा निर्भर छन्। यदि तपाईं नजिकैको समूह चाहानुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको रुचिलाई भविष्य समूहमा दर्ता गर्न तल फारम भर्नुहोस्।
SarcoidosisUK तब यो समूहको प्रयोग गर्नेछ यदि तपाईंलाई एक समूह सुरु हुन्छ भने तपाईंलाई सम्पर्क गर्न। लामो टिप्पणीहरू र कुनै समस्याको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईंले उपलब्ध गराउने विवरणहरू सरकोडोसिसयूवाईद्वारा सम्पर्क गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ तर तेस्रो पक्षहरूसँग कहिल्यै साझेदारी गरिनेछैन।
तपाईंको रुचि दर्ता गर्नुहोस्
म चाहन्छु ... म चाहन्छु ...समूह संलग्न गर्नुहोस्नया समूह सुरू गर्न सहयोग गर्नुहोस्अन्य (कृपया वर्णन गर्नुहोस्)
क्षेत्र क्षेत्रलन्डनदक्षिण पूर्वदक्षिण पश्चिमउत्तर पूर्वउत्तर पश्चिमदक्षिणमिडल्याण्ड्सपश्चिम मिडलैंड्सयॉर्कशायर र हम्बरपूर्वी एङ्ग्लियास्कटल्याण्डवेल्सउत्तरी आयरल्याण्ड
निकटतम शहर / शहर
कुनै अन्य उपयोगी टिप्पणीहरू ...
म सरकोडोसिसके को लागी खुसी छु र सहयोग पुर्याउने अन्य स्थानीय व्यक्तिहरु संग मलाई सम्पर्क गर्न को लागी (इमेल मात्र) म सरकोडोसिसके को लागी खुसी छु र सहयोग पुर्याउने अन्य स्थानीय व्यक्तिहरु संग मलाई सम्पर्क गर्न को लागी (इमेल मात्र)होहोइन